Ahoana ny fomba fanamboarana roaster kafe amin'ny milina fanasan-damba - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Ahoana ny fomba fanamboarana roaster kafe amin'ny milina fanasan-damba
Ahoana ny fomba fanamboarana roaster kafe amin'ny milina fanasan-damba
Raha mpamboly kafe ianao ary tianao atsatsiho ny tsaramaso misy anao Azo antoka fa ho tianao ity hack ity.
Momba izany avadiho ho toy ny roaster kafe ny amponga milina fanasan-damba. Araka ny hitanao, ny lahatsoratra tany am-boalohany dia miresaka momba ny fandrahoana tsaramaso kafe, fa manome hevitra bebe kokoa azonao ampiasaina azy io manendana kastany manankarena, tsirairay avy izay tena tiany ;-)
Raha mitady zavatra kely kokoa ianao dia jereo ity roaster kafe namboarina vita amin'ny vilany.
Ho hitantsika ny fananganana toaster sy ny fandrahoana ny kafe.
Fa andao mankany amin'ny antsipiriany momba ny fananganana. Ny varavarana sy ny fiarahan'ny motera.
Ho fanampin'ny amponga, ny tsikombakomba, ny tohana, izany hoe ilay roastera mihitsy, dia mila tavoahangy butana miaraka amin'ny fatana handoroany ny tsaramaso kafe.
Tena setroka be setroka izy io, ka ataovy any ivelan'ny trano.
Tsy azoko lazaina aminao ny fotoana fandrahoana satria miankina amin'ny haben'ny kafe, ny afo omenao. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fizahan-toetra ny tenanao. Mirary soa sy kafe tsara.
Raha iray amin'ireo mampiasa kapsily tokana ianao. Jereo ny anay tatatra kapoaka an-trano.
Dingana tsikelikely hananganana ilay toaster ataontsika vita amin'ny fitaovana simika.
Ny varavarana dia raikitra amin'ny vy vy 5mm sy ny kirihitra
Fiaraha-miasa amin'ny môtô
Motera elektrika 975 rpm miaraka amina reducer 10 rpm
Ankoatry ny firafitry ny chassis hanohanana ny motera dia tsy maintsy aorina eo anelanelan'ny faritry ny reducer môtô sy amponga.
Ny vahaolana dia tena tsotra dia tsotra, manamboatra takelaka vitsivitsy amin'ny vata famoahana izahay ary dia izay
Ary efa miasa
Ary hamita horonantsary miaraka amin'ny toaster miasa ;-)
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny Manao zavatra isika
Sokajy Cómo hacer Ticket navigation
Ahoana ny fomba fananganana milina fanodinana CNC axis 3 axis miaraka amin'i Arduino sy A4988
Ahoana ny fanamboarana ny jiron'i Kitt (Ilay fiara mahafinaritra)
30 hevitra momba ny "Ahoana ny fomba fanamboarana roaster kafe amin'ny milina fanasan-damba"
29 Desambra 2013 amin'ny 11:02 maraina
tsara, mety ho ny hoaviko amin'ny maha-mpialamboly ahy io.
13 Janoary 2014 tamin'ny 7:31 maraina
Mirary hariva, mandray arahaba tsara. Liana amin'ny fanaovana masinina fanonoana kafe aho, sendra ny hanana ny drafitra na ny antsipirian'ny fananganana milina hafa hafa noho ilay navoaka tao amin'ny sary.
Mialoha, misaotra anao amin'ny fiaraha-miasa.
14 Janoary 2014 amin'ny 12:44 hariva
Salama Edgar, amin'ny ankapobeny tsy manana zavatra hafa isika. Afaka manao zavatra mitovy amin'izany ianao fa amin'ny fitaovana hafa ary manapa-kevitra raha mandeha ho azy amin'ny motera ianao na manao izany amin'ny tanana. Miarahaba anao ary mirary soa
16 Febroary 2014 amin'ny 8:23 hariva
tolak'andro tsara, azonao zaraina ve ny drafitra momba an'io
7 aprily 2014 tamin'ny 3:52 maraina
Hevitra tena tsara.-raha azonao atao ny mandefa fisie azo pirinty hijerena raha mahavita azy aho
19 aprily 2014 tamin'ny 5:05 maraina
Fanadihadiana fanadihadiana tena mahaliana. Miarahaba anao,
25 aprily 2014 tamin'ny 2:37 maraina
Salama, azonao atao ve ny manampy ahy? Te-hanao milina vatomamy landihazo aho. Nahita azy ireo bebe kokoa na betsaka kokoa izy ireo, saingy tsy azoko ny fomba hanaovana azy. MISAOTRA
juan camacho roman
14 Mey 2014 amin'ny 6:37 hariva
Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba sy ny solika ampiasain'ny toasting sy ny fifehezana ny mari-pana
13 Jona 2014 amin'ny 5:23 maraina
Te hahafantatra ny fifehezana ny mari-pana sy ny fotoana aho
7 Jolay 2014 amin'ny 1:21 maraina
Te hanana fampahalalana bebe kokoa momba ny toaster manual aho, tena mahaliana izany, ho an'ny vondron-dreny vehivavy izay lohan'ny fianakaviana misafidy kafe amin'ny fijinjana. Te hanome izany aho, fa tsy haiko. ny fomba hanazavana ny fikirakirana.
8 Jolay 2014 amin'ny 5:43 hariva
Te hamorona zavatra aho ary tiako ny mandray hafatra amin'ity tranokala ity misaotra
19 Jolay 2014 amin'ny 5:35 hariva
Ry namako endrika tsara …… mety ho azonao alefa amiko ny drafitra miampy ny sary hahazoana iray ary hijerena namana tantsaha ………… .Misaotra indrindra anao ……………………. ***** *** *****
29 Aogositra 2014 amin'ny 5:15 maraina
Salama, HEVITRAO HEVITRAO, HEVITRA VITSY FOTSINY TENA MANGATAKA ANAO IANAO MBOLA HANAZAVA bebe kokoa ahy amin'ny daty sy ny drafitra hanaovana izany. MIJANJINA NY VALIN'NY PROMPANAO, MISAOTRA
5 septambra 2014 amin'ny 9:19 alina
Salama ary feno fankasitrahana tamin'ny fizarana an'ity sakana ity, afaka mandefa drafitra amin'ny alàlan'ny mailaka ve ianao, hiomanana miaraka amin'ny hetsika ho an'ny tantsaha, fantatro fa mila izany isika ary mandray anjara mavitrika amin'ny fiarahamonina
5 Oktobra 2014 amin'ny 2:19 alina
Ny hevitra tena tsara dia mety hanome ahy ny drafitra hanaovana
3 Novambra 2014 amin'ny 8:27 hariva
Tsara ny tolakandro, famoronana mahaliana, afaka mizara ny drafitra ianao, tiako ny manao masinina mitovy amin'ilay noforoninao. Azonao lazaina amiko ny karazana lasantsy ampiasainao. Misaotra betsaka anao ary miarahaba anao aho noho ny namoronanao miharihary.
28 Janoary 2015 tamin'ny 3:50 maraina
Tsara ny tolakandro, liana amin'ny fanaovana roaster kafe aho. Tahaka ilay omenao amin-katsaram-panahy, fa tiako ho fantatra hoe aiza sy aiza no hametrahanao ny lasantsy, ary raha halefanao amin-katsaram-panahy ireo drafitra dia hankasitrahako azy tsara, mirary tontolo andro tsara.
Hugo Donaldo Cruz Reyes
21 martsa 2015 amin'ny 5:41 hariva
Andro tsara tokoa,
Tiako ilay hevitra. Te hahafantatra ny fomba fihazana roaster kafe toa ilay nofaritanao aho, tamin'ny fampiasana ny varingarin'ilay milina fanasan-damba, ahoana no fomba anaovanao azy amin'ny alàlan'ny solika GAS LPG?
Alefaso azafady ny valinteninao tamin'ilay adiresy: hugodo10@gmail.com
Hugo Donaldo Cruz R.
4 Jona 2015 amin'ny 1:22 maraina
Fananganana tena tsara, azonao atao ve ny miara-miasa amiko amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fananganana ity milina ity azafady ho an'ny fianarako amin'ny oniversite
8 Jona 2015 amin'ny 10:46 hariva
Salama Roberto, ao amin'ny loharanon'ny lahatsoratra dia manana fampahalalana misimisy kokoa ianao http://wemakethings.net/2012/07/27/coffee_roaster_complete/
Jose Velasco Cuevas
22 Jolay 2015 amin'ny 11:06 maraina
Salama, te-hividy izany toaster izany aho, milina fanasan-kafe, famoronana lehibe io, ny tranonkalako dia cafe-viena@hotmail.com Gracias
22 Jolay 2015 amin'ny 11:07 maraina
Vidiko ny roastera mpamotika amponga fanasana lamba, misaotra betsaka
21 Aogositra 2015 amin'ny 1:30 hariva
Salama maraina, Nacho, te-hiarahaba anao aho, noho ny hevitra lehibe toy izany, tiako ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny kafe, tiako haseho ny fahaizanao, azo atao ny manazava bebe kokoa ny fametrahana ny motera sy ny famokarana hafanana bebe kokoa antsipiriany. Misaotra anao.
14 Febroary 2016 amin'ny 6:09 hariva
Te hahafantatra aho raha nisy nanangona ilay toaster
16 martsa 2016 amin'ny 12:20 maraina
Ry tompokolahy malala: Miresaka aminao aho fa manana milina fanasan-dàlana eo afovoany izay heveriko fa mety hanamboarana ny fitaovana fampiroboroboana ny kafe. MANGATAKA ANAO Lehibe aho, azafady mba ampahafantaro ahy ao COLOMBIA RAHA any amin'ny tanànan'ny BOGOTA, IBAGUE, GIRARDOT, MISY TEKNIKIKA IZAY HANAO ANAKO NY FANOHANANA NY ekipa. NY BOKIN'NY BATOKO NOMPO 3143456673
27 Novambra 2016 amin'ny 6:19 hariva
Hitako fa mahaliana ny tetikasanao, ary amin'ny hatsarany dia toa tsara be ilay izy, vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Mampalahelo fa rehefa ela dia ela dia tsy nisy voalaza momba an'ity ekipa ity.
Manontany anao ve ny amponga ampiasain'ny milina fanasan-damba 2 sa iray ihany ary norakofanao izany, manandrana manao aho, mamolavola fitaovana mitovy amin'izany, mazava ho azy ho an'ny tanjona hafa, ary mitady zavatra mitovy amin'izany aho, manana andro tsara ary manandrama raha hanao famoronana bebe kokoa, arahaba avy tampico tam mexico
17 Febroary 2017 amin'ny 2:39 hariva
Tsara tiako ny hanao azy fa ny varingarina azoko dia tsy mitovy amin'ilay iray, misokatra amin'ny lafiny iray izy io satria hatao amin'io tranga io. Misaotra
15 Jona 2017 amin'ny 8:36 hariva
Te-hanamboatra ny toaster kafe misy milina fanasan-damba aho, mba omeo ahy ny torolalana rehetra hahatratrarako azy na raha fantatro hoe aiza no misy drafitra bebe kokoa
30 Jolay 2017 amin'ny 11:33 hariva
Nahazo fiarahabana tamim-pitiavana avy amiko aho, famoronana tsara dia tsara, azoko atao ny mangataka anao azafady mba ampio aho amin'ny drafitra fa avy ao anaty toaster satria manao iray aho ary tsy haiko ny manao azy, ny fanampiana rehetra anao afaka manome ahy, tiako be izany
16 Novambra 2018 amin'ny 11:52 hariva
Salama namana, ato Merida, Venezoelà aho, efa manao milina aho .. Te hahafantatra ny halehiben'ny afo aho, misaotra anao, antenaiko fa tsy ho ela ny valiny
1 Fanendasana kafe
2 Toaster DIY
2.1 Ny varavarana
2.2 Fiaraha-miasa amin'ny môtô